रूसको सैन्य जहाज सिरियामा खस्यो, ३२ को मृत्यु | Dainik Sanjal
Home अन्तर्राष्ट्रिय रूसको सैन्य जहाज सिरियामा खस्यो, ३२ को मृत्यु
रूसको सैन्य जहाज सिरियामा खस्यो, ३२ को मृत्यु
एजेन्सी: रूसको एक सैन्य जहाज सिरियामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। रूसको रक्षा मन्त्रालयले जनाए अनुसार यो दुर्घटनामा कम्तिमा ३२ जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा जहाजमा सवार २६ यात्री र चालक दलका ६ सदस्यको ज्यान गएको छ ।
रिया नोभोस्ती समाचार एजेन्सीको समाचार अनुसार यो दुर्घटना सिरियाको तटीय शहर लताकिया नजिकै भएको हो । प्रारम्भिक समाचार अनुसार रूसको यो सैन्य जहाज खमेमिम एयरबेसमा उतर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको हो ।
रूसले जनाए अनुसार जहाजलाई ‘दुष्मन’ ले निशाना बनाएका होइनन् । शुरुवाती जाँच अनुसार दुर्घटनाको कारण प्राविधिक गडबडी भएको खुलेको छ ।
वार्तामा बस्न उत्तर कोरिया तयार, परमाणु परीक्षण रोक्ने
प्योङ्ग्याङ्ग: दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्ध सुधारको कोशिश जारी छ । यसैको एउटा कडीस्वरुप दक्षिण कोरियाको एउटा टोलीसँग मंगलवार पहिलो पटक उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग उनसँग भेट गरेको छ ।
भेटवार्तामा दुवै देशको टोलीबीच अघिल्लो महिना वार्ता गर्ने पनि सहमति भएको छ । सबैभन्दा रोचक कुरा त दक्षिण कोरियाली टोलीलाई किम जोङ्ग उन स्वयम्ले स्वागत गरेका छन् ।
यस क्रममा किमले भने, “म अब दक्षिण कोरियासँग राम्रो र निकट सम्बन्ध चहान्छु । मेरो मान्यता भनेको दुवै देश मिलेर अब अर्को इतिहास बनाउनु जरुरी छ ।’
यसभन्दा पहिले सन् २००७ मा दक्षिण कोरियाको एक टोली उत्तर कोरिया पुगेको थियो । त्यो बेला सत्तामा किम जोङ्गका पिता किम जोन इल थिए ।
सियोल फर्किएपछि दक्षिण कोरियाली टोलीले उत्तर कोरिया अप्रिलमा दुवै देशबीच ‘शिखर सम्मेलन’ गर्न तयार भएको छ। साथै वार्ताका क्रममा उसले आफ्नो परमाणु र मिसाइल परीक्षण पनि बन्द गर्ने भएको छ ।
उत्तर कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सी (केसीएनए) का अनुसार वार्तामा उत्तर-दक्षिणबीच सम्बन्ध बलियो बनाउन र कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति गर्नेबारे कुरा भएको थियो । यसका अलावा सियोलको टोलीले किमलाई राष्ट्रपति मून जेइ इनको निजी पत्र पनि हस्तान्तरण गरे ।
समाचार अनुसार दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति विगत लामो समयदेखि उत्तर कोरियासँग वार्ता सुरु गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । दक्षिण कोरियाको इन्टेलिजेन्स प्रमुख सूह हून र नेशनल सेक्युरिटी एडभाइजर चुङ्ग युई-योङ्गका अलावा अन्य अधिकारी पनि टोलीमा थिए । तर कति सं‌ख्यामा थिए भन्ने खुलाइएको छैन ।
समाचार एजेन्सी केसीएनएले किम र दक्षिण कोरियाली टोलीको फोटो पनि सार्वजनिक गरेको छ। यिनीहरुमा स्वयम् किम जोङ्ग उन दक्षिण कोरियाका अधिकारीलाई स्वागत गर्दै गरेका देखिएका छन् ।
पछिल्ला सात सालमा पहिलो पटक दक्षिण कोरियाका अधिकारी किम जोङ्ग उनसँग पहिलो पटक प्रत्यक्ष मिलेका हुन् । किम जोङ्ग उन आफ्ना पिता किम जोन इलको निधनपछि सन् २०११ मा सत्तामा आएका थिए । त्यही बेलादेखि दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।
कोरियाली प्रायाद्वीपमा लगातार बिग्रँदो अवस्थाको मध्यनजर गर्दै पहिलो पटक उत्तर कोरिया लगातार आफ्नो छवि सुधार्ने कोशिशमा लागेको छ । यसै साल दक्षिण कोरियामा भएको विन्टर ओलम्पिकमा उत्तर र दक्षिण कोरियाली टिमले एक झण्डामुनि भाग लिएका थिए । किमले आफ्नी बहिनी किम यो जोङ्गलाई पठाएर दुवै देशबीचको सम्बन्ध सुधार्न कोशिश गरेका थिए ।
यही कोशिशलाई निरन्तरता दिँदै दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जेई इनले गत हप्ता आफ्नो डेलिगेसन उत्तर कोरिया पठाउने टुंगो गरेका थिए
Breaking…..सिरिया त सकिने भयो साथमा बिश्व कै अन्त्य यसरी हुदैछ
सिरियामा बल्झियो युद्ध
सिरियाबाट आयो बिश्व रुहाउने खबर ! किन यस्तो गर्दै छ अमेरिका ?
भर्खरै अल्जेरियामा आर्मीको विमान दुर्घटना, २५७ जनाको मृत्यु अझै मृतकको संख्या बढ्ने ! जलिरहेको बिमानबाट यसरि निकालिदै छ शव हेर्नुहोस (भिडियो
दाइ नभएको मौकामा देवरले भाउजु बिताए…पढ्नुहोस् पूरा कथा 10 views
जोशमा होस गुमाउदै कलाकार, कला होइन, अंग देखाउदै युवा भड्काउदै – यो के गरिन् सरस्वतीले बाह्रकुने मेलामा – हेर्नुहोस् भिडियो !6views
हेर्दा हेर्दै केटीले च्याप्पै समातेपछि । कति सानाे हाे रे ।। भिडियाे सहित हेर्नुहोस –5views
पाइलटले विमानस्थल सखाप हुनबाट त जोगाए तर एक पछी अर्को रहस्य बाहिरियो,दुर्घटनाको कारण यस्तो रैछ भिडियो हेर्नुहोस4views
कोठामै यौन धन्दा गर्छन अनी एक रातको पचास हजार लिन्छिन कक्षा १० मा पढ्ने युवतीले..(पुरा पढ्नुहोस)4views
यी हिरोइन जसले फिल्म खेल्न निर्देशकसँग रात विताए! (फोटो सहित)3views
धर्तीको नरक बन्दै सिरिया – हृदयविदारक १० तस्विर3views
यो बर्ष को सबै भन्दा हट फिल्म हेट स्टोरी ४ को हट सिन यसरि बनाएको थियो हेर्नुस पुरा भिडियो सहित3views
बिहे गरेको एक महिनामै श्रीमती छोडेर विदेशिनु पर्दा3views
विश्वकै लामो जिब्रो भएकी यी महिला हेर्नुहोस त कति सम्म लामो छ त यिनको जिब्रो ? (भिडियोमा)3views